Ezolimo e-Australia | Ukuhamba kwe-Absolut
maruuzen | | Ihlaziywe 17/06/2021 23:24 | Ostreliya
Elinye lawona mazwe abaluleke kakhulu e-Oceania yi-Australia, ilizwe elikude namhlanje elibonakala njengendawo engenabantu abangenayo iCovid, apho ubomi bukhona njengangaphambili. Okanye phantse. Kodwa yintoni esiyaziyo nge-Australia? Singaqala ngokucinga ukuba ngolu hlobo lobubanzi bomhlaba ezolimo e-Australia zibalulekile.
Kwaye kunjalo, ezolimo kunye nomntu zinxibelelene ngokusondeleyo ukusukela ekuqaleni kwexesha, kwaye kwimeko ye-Australia, ukusukela ngexesha lobukoloniyali bayo yi-United Kingdom. Kodwa loluphi uhlobo lwezityalo olukhoyo, aphi amasimi, ithunyelwa phi? Yonke loo nto namhlanje, kwinqaku lethu leAbsolut Travel.
2 Ezolimo e-Australia
Njengoko besesitshilo ngasentla, ezolimo ngumsebenzi obaluleke kakhulu kuphuhliso lwamazwe afana ne-Australia, apho ulwandiso lomhlaba lukhulu. Apha, ngokwesiko, ilawula ingqolowa neenkomo Kwaye kunjalo nanamhlanje, kwinkulungwane yama-XNUMX.
Kuyinyani ukuba ubukhulu becala umhlaba waseAustralia ubharhile, kodwa ayingabo bonke, kwaye abantu baseAustralia bazabalaze ukufaka Iinkqubo zokunkcenkceshela Kubalulekile ukuba kulwe ukoma kwendalo komhlaba imihla ngemihla. Eli lizwe lineekhilomitha ezingaphezu kwezigidi ezisixhenxe kumphezulu, phakathi kweentaba, iintlango, amalwandle ashushu kunye neeflethi zetyuwa.
Yintoni ekhuliswa e-Australia? Ngokuyintloko ingqolowa nerhasi, umoba, ilupines (ngowona mvelisi uphambili kwihlabathi liphela), amantshontsho (ngowesibini emhlabeni), canola, iidiliya kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci liyalima irayisi, umbona, isitrasi kunye nezinye iziqhamo.
Kodwa makhe sibone, ezona mveliso ziphambili zezolimo zase-Australia yingqolowa, irhasi kunye nommoba. Bayamlandela kwimicimbi yezolimo iinkomo, iinkomo kunye neenkomo, kunye neziphumo zayo ezinje ngeemveliso zobisi okanye uboya, inyama yegusha, iziqhamo kunye nemifuno. Ingqolowa ihamba phambili kwaye iyakhula kuwo onke amazwe, nangona zikhona "iibhanti zengqolowa" kumazantsi mpuma nakumazantsi mpuma elizwe. Kodwa ngokuchaseneyo nabantu abakumazantsi e-hemisphere okhuphisana nayo, ilizwe alinabusika obuqhelekileyo okanye imithombo, ke imveliso yalo ijolise kwingqolowa emhlophe (yezonka kunye ne-pasta) kwaye ayivelisi iinkozo zibomvu.
Ityalwa ebusika, ngoMeyi, ngoJuni nangoJulayi, kwaye isivuno siqala eQueensland ngoSeptemba okanye ngo-Okthobha size siphele eVictoria nakumazantsi eNtshona Australia ngoJanuwari. Imveliso yenziwe ngoomatshini kakhulu Ukulinywa kweenkozo kuhambelana nokukhulisa iinkomo nokulima irhasi nezinye iinkozo. Zombini ezi zinto zisebenza kwindawo enye yezolimo.
Ukutya okuziinkozo, iimbewu yeoyile kunye nemidumba ziveliswa ngomlinganiselo omkhulu, zombini zisetyenziswa ngabantu kunye nokondla imfuyo eqhelekileyo. Ummoba ulinywa kwiitropiki ikwabalulekile kuqoqosho lwesizwe, kodwa njengoko ayixhaswa (njengoko kunjalo eYurophu okanye eMelika), kunzima kakhulu ukuba ikhuphisane nayo, umzekelo, ishishini leswekile laseBrazil, elibetha kakhulu kukhuphiswano.
Ukulima ummoba kubaluleke kakhulu kunxweme lwaseQueensland nakumantla eNew South Wales okanye kwindawo yonkcenkceshelo eNtshona Australia. Phantse akukho msebenzi wezandla, yonke into ilungiselelwe kakhulu, ukusuka ekutyalweni ukuya ekuvuneni nasekugayeni.
Inyama yiklasikhi yase-Australia nangona kunjalo iinkomo Ayidumisi njengeArgentina okanye ithengiswe njengeBrazil, umzekelo. Kodwa kufuneka kuthiwe ngumthengisi wenyama yesibini emva kweBrazil. Kuwo onke amazwe ase-Australia iinkomo ziyakhuliswa kwaye zixhomekeke kwintengiso yangaphandle kuba phantse i-60% yemveliso ithunyelwa kumazwe angaphandle, ngakumbi iJapan, Korea ne-United States.
Phambi kokufika kwabantu baseYurophu e-Australia bekungekabikho baphumeleleyo apha. YayingeBritani ezisa ezinye iintlanga I-Hereford, iAberdeen Angus okanye iBos taurus ethi ekugqibeleni ibe yeyona iphumeleleyo. Namhlanje kukho izikhalazo ezininzi malunga nalo msebenzi, kuba kwihlabathi liphela kukho intetho yokunciphisa ukusetyenziswa kwenyama, ukuba yinyama yemifuno, inkohlakalo yezilwanyana kunye nokufudumala kwehlabathi ngenxa yelindle lezilwanyana, kodwa yonke into ihleli injalo.
Kwaye uthini nge iigusha? Kwiminyaka ye-70 yenkulungwane yama-XNUMX inani leenkomo lalilikhulu kakhulu, kodwa ukusukela ngoko laqala ukwehla kwaye namhlanje lisisahlulo sesithathu saloo nto yayilixesha. Usese Australia inkokeli yehlabathi kwimveliso yoboya beemerino. Kwaye bambalwa abavelisi beenkomo kunye nabalimi abaninzi abadibanisa iinkomo kunye neenkozo.
Iminquma ibilinywa e-Australia ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX. Imithi yeminquma yokuqala yatyalwa eMoreton Bay, eQueensland, kwintolongo (khumbula ukuba imvelaphi yelizwe kukuba likholoni). Phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX bekukho amawaka eehektare kunye nemithi yeminquma kwaye ikhule ngale ndlela ekuhambeni kwexesha. Namhlanje ithunyelwa e-United States, Yurophu, China, Japan nase New Zealand. Xa amaTshayina aqala ukusebenzisa ioyile yomnquma ngaphezulu baqala ukutyala imali e-Australia ke kuyabonakala ukuba imveliso iyonyuka.
Kwakhona umqhaphu ulinywe kwaye njengoko besitshilo ngaphambili, irayisi, icuba, iziqhamo ezikweleenjiko, umbona, amazimba… Ewe, iidiliya zefayile ye imveliso yewayini. Ukulinywa kwezityalo kwafumana ukwanda ngeminyaka yoo-90 kwaye phantse isiqingatha semveliso sathunyelwa e-United Kingdom nakwezona zincinci zise New Zealand, Canada, United States nase Germany.
Okokugqibela, kufuneka kuthiwe Urhulumente wase-Australia ubandakanyeka kakhulu kuyo yonke imisebenzi yasemaphandleni: ukusuka kwinkuthazo eyinike oovulindlela bokuqala emsebenzini womhlaba, ngokuya kwimisebenzi eyahlukeneyo yophando eyenzayo okanye iinkonzo zemfundo kunye nezempilo, kumbutho wentengiso yesizwe neyamazwe aphesheya, ulawulo lwamaxabiso, inkxaso mali kunye ivuliwe.
I-cinema yase-Australia ineefilimu ezininzi ezibonisa olu nxibelelwano lukhulu lwabantu nomhlaba. Ukuba ndiyakhumbula ndikhumbula uthotho lweTV Intaka iyacula ingekafi, apho inenekazi elithandana nomfundisi lalinomnini wefama ebanzi necebileyo; kanjalo Ostreliya, Ifilimu edlala uNicole Kidman othetha ngabavelisi beenkomo; okanye uthotho oluninzi lwabalinganiswa babo abazinikele kwimisebenzi yezolimo. Iintombi zikaMcLeod, umzekelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ezolimo e-Australia
Ifermin sanchez ramiirez sitsho
ndifumana umbuliso okhethekileyo kummi woluntu oluhlwempuzekileyo kwisithili se-condormarca kwiphondo le-bolivar yenkululeko, ilizwe lase-Peru. ezolimo nemfuyo.Ukuba ndingakucela ezinye iividiyo sodre ukusetyenziswa kwetekhnoloji kwezolimo nakwimfuyo, ndiyathemba ukuba ndinganxibelelana nabantu abavela kwelinye icala lomhlaba wethu.
Phendula kwifermin sanchez ramiirez
ezolimo zinomdla kakhulu kwaye ndihlala ngokucacileyo hahahahaha
UFelipe Antonio Zatarain Beltran sitsho
Ndinomdla wokwazi ngobuchwephesha bezithili zokunkcenkceshela, ngakumbi ezo zemijelo (amasango azenzekelayo)
Phendula uFelipe Antonio Zatarain Beltran
Amasiko aseRussia: Baba Yaga
USavita Bhabhi: Eyona Comic idumileyo kunye nephikisayo eIndiya